Yaap Money, ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fifanakalozana tsotra | Androidsis
Efa valo volana teo ho eo izay no nilazako taminao fampiharana vaovao ho an'ny Android izany amin'ny anaran'ny Yaap Money nanolotra anay ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mitantana ny fandoavam-bola na ny famindrana vola amin'ny fampiononana atolotry ny fitaovana Android farany, na finday finday finday, Tablets na antsoina hoe Phablets.
Rehefa vita izany fotoana izany dia tonga ny fotoana hamakafaka ny fivoaran'ny Yaap Money na inona ho ahy manokana no dikan'ny iray amin'ireo fampiharana multiplatform tsara indrindra ankehitriny ho an'ny mandefa sy mandray vola amin'ny alàlan'ny finday.
Tsy misy isalasalana, amin'ity fotoana kely niainany ity, Yaap Money dia nahavita nampifandray ireo mpampiasa ny rafitra fiasa samihafa misy azy ankehitriny, ary tsy afaka maka azy io maimaimpoana tanteraka avy amin'ny magazay fangatahana ofisialy ho an'ny Android, ny Google Play Store, manana ny kinova mitovy aminy ihany koa izahay Apple iOS o Windows Phone.
Amin'ity fotoana fohy ity dia Yaap Money mitondra eo amintsika dia efa ilay fampiharana tiana kokoa hanatontosa fifanakalozana tsotra eo amin'ireo mpampiasa, indrindra fa ny Yaap Money dia efa manana totaliny misintona mihoatra ny 350 voaisa amin'ireo fitaovana Android, Apple ary Windows Phone, izay efa misy sahady 130 mpampiasa voasoratra anarana mavitrika izay miantehitra amin'ny fangatahana handefasana na handoa vola kely isan'andro isan'andro.
Anisan'ireo angona manan-danja indrindra azontsika asongadina amin'ny tantara fohy momba ny Yaap Money, afaka manonona manokana momba izany isika statistika fampiasana izay mihoatra ny fahalianana fotsiny:
Hetsika maherin'ny 500 no atao isan'andro (famindrana vola sy fangatahana fifandraisana).
Mpampiasa voasoratra anarana 2 amin'ny 3 no nanao fanolorana na fangatahana farafaharatsiny.
Alakamisy, alahady ary alatsinainy no andro be atao indrindra amin'ny fampiharana.
Ny ankamaroan'ny hetsika dia atao eo anelanelan'ny 19:30 hariva sy sasakalina.
Fampiasana ampiasaina indrindra: sakafo atoandro sy sakafo hariva, fanatanjahan-tena, fanomezana.
Izany fahombiazana sy fanohanana rehetra izany avy amin'ny mpampiasa ireo sehatra finday samihafa misy azy Yaap Money, adika amin'ny fampandrosoana ny fampiharana tsy tapaka manolotra serivisy tsara kokoa raha azo atao, ankoatry ny fampidirana amin'ny fanavaozana ny fampiharana amin'ny ho avy toy ny fampiasa mahaliana izay hotanisaiko etsy ambany:
Fifandraisana mivantana amin'ireo fampiharana mizara ny toekarena como el Timpik, tambajotra sosialy hilalaovana fanatanjahantena ahafahanao mandoa vola mivantana amin'ny mpampiasa nandamina lalao ary nitahiry kianja (baolina kitra, tenisy paddle sns).
Ho avy tsy ho ela ny fampidirana amina fampiharana hafa: fividianana entana faharoa, fandoavam-bola amin'ny serivisy eo amin'ny tsirairay ...
ireo endri-javatra vaovao efatra izay tsy isalasalana fa tena mahaliana, ny orinasa mamolavola ny fampiharana dia mampita mivantana amintsika fa misy izy ireo tamin'ity taona ity ihany nandritra ny semester faharoa ny momba azy.
Raha toa ianao ka mbola iray amin'ireo mpampiasa vitsy tsy mahalala ny toetra tsara rehetra atolotray antsika Yaap Money hanatanterahana ireo fifampiraharahana kely isan'andro isan'andro, Manoro hevitra anao aho handalo ity lahatsoratra ity nataoko tamin'ny androny izay hanazavantsika ny tsirairay amin'ireo asany lehibe sy mahasoa mba handoavana, handefasana ary handraisana vola am-pitoniana avy amin'ny finday, na inona na inona ny rafitra miasa.
Azonao atao ny misintona ny Yaap Money ho an'ny Android tsindrio eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Yaap Money, ilay fampiharana fandoavam-bola amin'ny finday izay lasa lamaody
Google dia manantena ny fifehezana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny 'Voice Access' amin'ny fandaharana I / O
ZTE Nubia Z9 dia ofisialy izao: efijery F5,2 810 ", fakan-tsary Snapdragon 16 ary XNUMXMP